Izindaba - Imakethe Ye-Plexiglass Iyakhula
I-Plexiglass iyinto eshisayo ngokuzumayo, njengoba isidingo sokuqedwa nokuvikelwa komphakathi sikhuphukile. Lokho kusho ukuphakama okukhulu ebhizinisini lomhlinzeki we-acrylic plexiglass.
Ukushesha kwezingcingo kuqale maphakathi noMashi. Ngenkathi ubhadane lwe-coronavirus lushayela ngokushesha emhlabeni wonke, izibhedlela bezidinga kakhulu izivikelo zobuso zokuvikela, izindawo zomphakathi zidinga imigoqo yokuvikela umphakathi noma ukwahlukanisa okuvikelayo. Ngakho-ke imakethe yaphendukela kumkhiqizi weshidi le-thermoplastic, okokusebenza okufana nengilazi okudingekayo ekukhiqizeni izivikelo zobuso nezithiyo zokuzivikela.
Isidingo sezivikelo zobuso singahlehle size siphele unyaka, kepha asiqiniseki ukuthi imakethe ekhulayo yezithiyo ze-acrylic izokwehla noma nini kungekudala. Ngaphezu kokukhula kwesidingo esivela ezindaweni zokudlela, abathengisi namahhovisi avulwa kancane, amacala amaningi okusetshenziswa kanye nabathengi abanentshisekelo baqhubeka nokuvela njengoba imisebenzi eminingi yebhizinisi noma yomhlangano ivulwa, isampula elilodwa njengoba kubikwe ngezansi:
“Ingilazi ye-Acyclic efakwe ephalamende likahulumeni eJalimane- Isikhathi sokuqala selokhu kuqale inkinga ye-coronavirus eJalimane, iPhalamende laseNorth-Rhine Westphalia lahlangana ngokugcwele. Ukugcina ibanga lomphakathi abomthetho abangama-240 behlukaniswe ngamabhokisi engilazi acyclic. ”
Njengomkhiqizi wekhwalithi wezinto ezihamba phambili ze-acrylic (PMMA) e-China, i-DHUA ithole ama-oda wamashidi acacile e-barrier sheet ayengena ngaphakathi. Okuyinhloko abathengi abaningi babedinga amashidi afakwe phakathi kwabaphathi bamakhasimende namakhasimende, futhi amabhizinisi amaningi alandela ngokushesha. Manje njengamanye ama-plexiglass akhiqizwayo, i-DHUA ikhiqiza imigoqo ecacile efakwe phakathi kwamadokodo namatafula ezindaweni zokudlela, izingxenyana ezingamabhokisi okuhlukanisa abashayeli kubagibeli abagibelayo kanye "neziteshi zokuvimbela" zabaqashi ukuthi bathathe ngokuphepha amazinga okushisa abasebenzi ekuqaleni kwamashifu. Imikhiqizo isivele ingene kubathengisi, emagcekeni ezinkantolo, emidlalo yaseshashalazini, ezikoleni nasemahhovisi lapho kusebenza khona izindawo.